MACLUUMAADKA TARANKA BASSETOODLE DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Bassetoodle Dog iyo Sawiro
Basset Hound / Poodle ey isku dhafan oo isku dhafan
Teddy toy Poodle / Basset Hound mix (Bassetoodle) qiyaastii 7 sano jir
Bassetoodle ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Basset Hound iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Ollie hooyadiis waxay ahayd mid khiyaano badan Basset Hound iyo aabihiis, oo ah Poodle toy ah khudaar. Markuu ku dhowaad 2 sano jir culeyskiisu wuxuu ka yaraa 27 rodol (12 kg) waana garabka 14 inji (35 cm) Shakhsiyad: aad u ciyaar badan, eey iyo dad saaxiibtinimo leh, heer tamar ka sarreeya kan Basset, laakiin aan u sarreynin sida badan Toy Poodles. Jaakadiisa siligga ah ayaa xilliyada la daadiyaa, waxayna u baahan tahay in sanadkiiba laba jeer laga siibto.
'Haye, waxaan ka imid dalka Brazil waxaanan dirayaa sawirka eey eyga isku dhafan ee Balu. Waa dheddig aabbaheed waa Basset bunni ah (dhogor gaaban) hooyadeedna waa Poodle cad, wax yar ka weyn Poodle-ka toy-da. Runtii way cayilan tahay hal sabab ayaa ah iyada oo xubnaheeda gudaha ay aad ugu weyn yihiin jirkeeda, laakiin runti way qurux badan tahay. '
Daisy the Bassetoodle at 3 sano jir— 'Hooyadeed waxay ahayd 25-lb. purebred Bassett Hound oo aabbeheed wuxuu ahaa nin jilicsan oo Poodle cad ah. Waxay miisaankeedu yahay 23 lbs., Waxay leedahay lugaha waxoogaa ka dheer Bassett-ka caadiga ah, laakiin cagteeda hore waxay sameysaa soo bixitaanka Basset! Iyadu waa mid jaalle ah oo nabdoon guriga dhexdiisa oo wax ka badan ma jecla inay ku ag wareegto. Markay bannaanka joogto way ku faraxsan tahay inay qof aragto! Waxay jeceshahay carruurta, way leefleexdaa wejiga bisad subax kasta, waxayna ku raaxeeysataa naxdin, laakiin ma ceyrsato, labadeenna shimbirood. Dabaydeeda ayay u ruxaysaa iyada oo sidii qof waalan markay aragto qof ay garanayso! Iyadu waa, marka la soo koobo, EEYKA DHAMMAAN! Timaheeda iyo cagaha cidiyaha si dhakhso leh ayey u koraan waxayna u baahan yihiin hagaajin joogto ah. Waan jeclahay dhagaha waaweyn ee dabaylaha wada leh iyo timo jilicsan oo cadcad Poodle leh liin iyo calaamado cad Bassett! ''
Daisy the Bassetoodle sida eey yar oo 10 toddobaad jir ah
Sinjibiil toy Poodle / Basset Hound mix (Bassetoodle) qiyaastii 11 sano jir— 'Waxay ku hooseysaa dhulka waxayna muujineysaa in badan oo ka mid ah astaamaha shakhsiyadda Basset.'
Liiska eeyaha Basset Hound Mix eeyaha
miyir doofaar ey ku jiri karaa
qas-pei pitbull mix
chihuahua iyo yorkie oo timo dhaadheer leh
intee le'eg ayuu bood boodayaa